သကၤန္​းဝတ္​နွင္​့ သားမယားအျဖစ္​ ျပဳက်င္​့မႈ ျဖစ္​ပြား – WunYan
ျဖစ္​စဥ္​မွာ ​ေက်ာင္​းထိုင္​ဆရာ​ေတာ္​ ဦးဒီပဝံသ(ခ)ဦးတင္​ဝင္​း(၆၀)နွစ္​(၄၀)ဝါ(ဘ)ဦးအင္​းနားသည္​ ​ေက်ာင္​းအတြင္​း၌၊ တစ္​ပါးထိုင္​​ေက်ာင္​း​ေဆာင္​(၄)​လုံး​ေဆာက္​လုပ္​၍ မိသားစု(၄)စုအား ငွားရမ္​း​ထားရွိျပီး၊အဆိုပါမိသားစုထဲတြင္​ ၊တရားလုိ မ——–(၁၉)နွစ္​နွင္​့ ၎၏ ခင္​ပြန္​း ကို——–(၂၆)နွစ္​၊​တို႔​သည္​၊ လြန္​ခဲ့​ေသာ(၁၅)ရက္​ခန္​႔က ငွားရမ္​း​ေနထိုင္​ခဲ့ၾကသည္​။​
ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီ ၁၃ ရက္​​ေန႔ ည ၁၀း၃၀ အခ်ိန္​ခန္​႔တြင္​ မ—–အား ဦးဒီပဝံသ(ခ)ဦးတင္ဝင္​းမွ၊၎းက်ိန္​းစက္​ရာအခန္​းတြင္​းသို႔ ​ေခၚ​ေဆာင္​၍(၅)မိနစ္​ခန္​႔ ႏွိပ္​နွယ္​​ေစခဲ့ၿပီး​ေနာက္​ မ——-(၁၉)နွစ္​၏ အကၤ်ီအဝတ္​အစားမ်ားကုိ အတင္​းဆြဲခြၽတ္​၍ ကုတင္​​ေပၚတြန္​းလဲကာ ၊​ေအာ္​ပါက ​သတ္​ပစ္​မည္​၊​ ေက်ာင္းထဲမွနွင္​ထုတ္​မည္​ဟု​ ေျပာဆိုကာ (၁၅)မိနစ္​ခန္​႔အၾကာ သားမယားအျဖစ္​ အဓမၼျပဳက်င္​့​ေနစဥ္​ ခင္​ပြန္းျဖစ္​သူ ကို—–​ေရာက္​ရွိလာၿပီး၊တရားလိုအား သားမယားအျဖစ္​ အဓၶမျပဳက်င္​့ ​ေနသည္​ကို​ေတြ႕ျမင္​ သိရွိရသျဖင္​့….
သင်္ကန်းဝတ်နှင့် သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ဥပ္ပုံစုရပ်ကွက်၊ကရင်ခြံဓမ္မရိပ်သာကျောင်း၊ကျောင်းဝင်းတွင်သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀း၃၀ နာရီခန့်အချိန်၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဒီပဝံသ(ခ)ဦးတင်ဝင်း(၆၀)နှစ်(၄၀)ဝါ(ဘ)ဦးအင်းနားသည် ကျောင်းအတွင်း၌၊ တစ်ပါးထိုင်ကျောင်းဆောင်(၄)လုံးဆောက်လုပ်၍ မိသားစု(၄)စုအား ငှားရမ်းထားရှိပြီး၊အဆိုပါမိသားစုထဲတွင် ၊တရားလို မ——–(၁၉)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ ခင်ပွန်း ကို——–(၂၆)နှစ်၊တို့သည်၊ လွန်ခဲ့သော(၁၅)ရက်ခန့်က ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် မ—–အား ဦးဒီပဝံသ(ခ)ဦးတင်ဝင်းမှ၊၎င်းးကျိန်းစက်ရာအခန်းတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်၍(၅)မိနစ်ခန့် နှိပ်နှယ်စေခဲ့ပြီးနောက် မ——-(၁၉)နှစ်၏ အင်္ကျီအဝတ်အစားများကို အတင်းဆွဲချွတ်၍ ကုတင်ပေါ်တွန်းလဲကာ ၊အော်ပါက သတ်ပစ်မည်၊ ကျောင်းထဲမှနှင်ထုတ်မည်ဟု ပြောဆိုကာ (၁၅)မိနစ်ခန့်အကြာ သားမယားအဖြစ် အဓမ္မပြုကျင့်နေစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကို—–ရောက်ရှိလာပြီး၊တရားလိုအား သားမယားအဖြစ် အဓ္ဓမပြုကျင့် နေသည်ကိုတွေ့မြင် သိရှိရသဖြင့်….
သားမယားအဖြစ် အဓ္ဓမပြုကျင့်သူဦးဒီပဝံသ(ခ)ဦးတင်ဝင်းအား တိုက်ကြီးရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ခိုင်စိုးမှစစ်ဆေးပြီး သာသနာရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်သံဃနာယက ဆရာတော်များမှ လူဝတ်လဲစေပြီး ရဲစခန်းမှ (ပ)၂၀၉/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီပုဒ်မ ၃၇၆ဖြင့် အမှုဖွင့်လျှက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ထို့ပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းတွင် မိသားစုများရှိနေခြင်းဖြင့် မမျှော်မှန်းနိုင်သောပြဿများဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် မိသားများမနေရန်သာသနာရေးမှူးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။